Ihe ụtọ, swiiti, achịcha | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Udi: Desserts, Sweets, Bread
Danish nri: Dansk Kryddkaka (Danish ose nri) - Ntụziaka
Ihe na 26.02.2019 26.02.2019
Na Danmark, onye ọ bụla bi na ya nwere agụụ maka mmiri. N'agbanyeghị ịhụnanya nke achịcha na muffins, e nwere mmadụ ole na ole dị n'etiti ndị Danes. Nke mbụ, a na-asọpụrụ ndụ ndụ. Nke abuo, ezigbo mma ulo. Nke atọ, ...
Achịcha nke Azerbaijan: Shakerbur - wafer patties na mkpụrụ
Ihe na 14.02.2019 14.02.2019
Na Azerbaijan, shakerbura bụ pastry dị ụtọ na-eje ozi maka tii. N'ezie, ndị a bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ dị iche. Kwadebe ha site na crumbly waffle mgwakota agwa. N'ime ha ha na-etinye akọrọ (ọ bụghị mmiri!) Nri si na ...
Achịcha "Christmas" na kiwi na butter bọta - nke dị oke ncha
Ihe na 25.11.2018
Ya mere na n'afọ New 2019, ndụ dị ụtọ, ọ dịghịkwa ebe ọ na-ewute na ya, ka anyị kwadebe ọtụtụ desserts dị ụtọ maka ezumike ahụ. Aṅụ sịga, jelii, kuki, ma, n'ezie, achịcha dị nro ...
Ka okpokoro nke 2019 nke Afọ Ọhụrụ: kuki Pigs Mmanụ a --ụ - Ntụziaka ahụ dị oke mma!
Ebe ọ bụ na n'ehihie nke Afọ nke Ọgbọ Ala, gbakwunye okpokoro nri ụfọdụ n'ụdị ezi. Ọ nwere ike ịbụ salad ma ọ bụ achịcha, mana anyị na-adụ gị ọdụ ka ị kpochaa kuki ndị dị otú ahụ - ...
Dessert na tebụl Afọ Ọhụrụ 2019: banana-nut ice cream - a uzommeputa
Ihe na 23.11.2018
Mee ezigbo ice cream. Ọ dị nro, nke dị nro, nke a ga - eme - ọ ga - abụ nnukwu mmemme nke Afọ Ọhụrụ. Okpuru anu ulo nwere udi uto, dika esi esi ya, n'ihi na o sitere na ihe ndi ozo. Enwere m ike ikwu n'enweghị nsogbu ...
Na tebụl Afọ Ọhụrụ 2019: Chaos cake na mkpụrụ osisi a mịrị amị na ude mmiri
Ihe na 13.11.2018
Na New Year Eve Eve XUMUM, ị ga-enwe ihe oriri kachasị amasị gị na tebụl: pastries na tomato, mkpụrụ osisi na cheese cheese, oatmeal ma ọ bụ kuki gingerbread, candies of dried fruits and nuts, ice home. Ọ bụrụ na achicha - ...
Gwa m ụfọdụ uzommeputa dị mfe maka oké waffles na waffle ígwè!
Gwa m ụfọdụ uzommeputa dị mfe maka oké waffles na waffle ígwè! na pyrogblog na saịtị. com look, e nwere n'ozuzu Ezi ntụziaka norms ntụ ọka 175 gr nnu 1 / 2 tsp. 2 shuga Art. ...
Kedu esi tughari bisikiiki n'ime mpịakọta ka ọ ghara ịkụda?
Kedu esi tughari bisikiiki n'ime mpịakọta ka ọ ghara ịkụda? ọ dị mkpa ka ị gbanyụọ mgbe ọ na-ekpo ọkụ. saturate ma mee ka mmiri na ihe siri ike na cellophane mgbe a na-eme ka biskii dị mfe ka ọ dị mfe ...
Kedu ka esi eme bred chocolate?
Etu esi eme chocolate ihendori? Chi gbara ọchịchịrị (ala) - 250 g Egg yolks - 4 PC. Nri shuga - 4 Art. l Mmanụ ude - iko nke 2 iko Vanilla wepụ - 1 ...
Kedu ihe a na-esi sie nsen bara uru?
Kedu ihe a na-esi sie nsen bara uru? nkochi nwere ihe ụfọdụ, chefuo, maka ụbụrụ, lecithin bụ ihe, protein bụkwa protein 100% Nsen na-egbochi ịme ọrịa kansa. Ndị a Njirimara nke egg show ...
chọrọ uzommeputa. chalottes na Bekee na nsụgharị
chọrọ uzommeputa. chalottes na Bekee na nsụgharị nke tebụl: apụl achicha, xnumx, xboxes, bọta
Ezi uzommeputa maka achicha achicha na achicha.
Ezi nri maka ime achịcha ojii na onye na-eme achịcha. Lee azịza m na album foto “achịcha m” ihe omume Rye Bread Rye (3 hour. 30 min.). Jiri mgwakota agwa agwakọta jikọtara mma) Yeast 1,5 ...
Olee otú esi mgwakota agwa na akọrọ saf now yist?
Olee otú esi mgwakota agwa na akọrọ saf now yist? Eeh, chefuo banyere ihe iko yist na-ada ruo mgbe ebighi ebi, ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ezigbo achịcha Ya enwela mgbe uto nke na-enye ndụ yist.
gwa m ihe ị nwere ike ime si yogọt. Gwa m ihe ị nwere ike ime si yogọt! ekele m
Gwa m ihe ị nwere ike ime bred. Gwa m ihe ị nwere ike ime bred! daalụ achicha, tinyekwa ntụ ọka, shuga, soda na ndochi ọ bụla. ga-atọ ụtọ. site na mmiri ara ehi zoro ezo ị nwere ike ime cheese chiiz .... ...
Biko ị nwere ike ịgwa m uzommeputa maka nri Borodino, nke a ga-esi na ya mee achịcha.
Biko ị nwere ike ịgwa m uzommeputa maka nri Borodino, nke a ga-esi na ya mee achịcha. Anụ m maka ụdị Rye custet 40gr. Malt ime biya 80ml mmiri mmiri na-esi mmiri mmiri na-acha mmiri ọkụ 14gr. ọka wheat wheat 225gr rye 325gr. 1HOL ...
Kedu ihe dị n'ụlọ ị nwere ike ịme nri na-acha akwụkwọ ndụ?
Kedu ihe dị n'ụlọ ị nwere ike ịme nri na-acha akwụkwọ ndụ? ete uhie kabeeji, afanyekwa ihe ọṅụṅụ + di na nwunye tụlee nke utoojoo / mmanya, lemon / agaghị adị ndụ, ma shades nke -acha anụnụ anụnụ ...
Kedu ka ị ga - esi chọọ ụlọ Napoleon mma n'ụlọ?
Kedu ka ị ga - esi chọọ ụlọ Napoleon mma n'ụlọ? Jiri sirinji fesaa Roses si n'aka ebe a na-edebe ya, fesaa ya na ofe swootu ma ọ bụ aki oyibo. Na mkpokọta, ahụrụ m ihe ịchọ mma eji ere ere na ...
Kedu ihe a ga-eme site na semolina, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ maka nri, olee ihe ntụziaka dị?
Kedu ihe a ga-eme site na semolina, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ maka nri, olee ihe ntụziaka dị? Enwere m ebe dị otú a uzommeputa maka nwoke, foto mo: Mgwakota agwa: 2 iko nke semolina 0,5l kefir 1, h. l na-eme achịcha ntụ ọka 1 sugar shuga ...
Gwa m ihe mgbochi baklava?
Gwa m uzommeputa baklava? Lee, agụụ na-agụ anyị. Yum yum, kedu ụdị goodies. M na-agafe ... ọrụ zuru ezu na-enweghị m ..))) So. Nri kachasị amasị m. Kwadebe dị oke nfe na ngwa ngwa - ...
Kedu ụdị soda m ga - eji dochie 1 na tablespoon nke ntụ ntụ?
Kedu ụdị soda m ga - eji dochie 1 na tablespoon nke ntụ ntụ? Ọ dịghị mkpa mgbe niile ịgbanwe soda na ntụ ntụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na MD nọ na ule ahụ, a ga-achọ soda. N'ọnọdụ ndị ọzọ ...
Page 1 Page 2 ... Page 32 Next Page
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,427.